Deltek ConceptsShare: Ntughari okike, nyocha na nnabata na ntanetị | Martech Zone
Ka ụlọ ọrụ na-achọ ịkwalite arụpụtaghị ihe na obere otu, ha chọrọ ngwaọrụ ga-enyere ha aka ịbawanye arụmọrụ. Maka ahia na ndi otu okike nke putara nzuko oru choro na oge, ichikota onye ahia ma obu ndi oru ya, imezighari ihe, inweta nnabata na inye oru a site na oge a kara aka.
Ọ bụ ebe ahụ Deltek's ConceptShare ngwọta nwere ike inyere aka. Ngwaọrụ a na - enyere ndị ahịa na ndị otu aka ka ha nyekwuo ọdịnaya ngwa ngwa ma dịkwa ọnụ ala site na imeziwanye usoro nyocha na nnabata.
Deltek ConceptShare Atụmatụ na Uru
Mee ka ndị otu nyocha gị kwekọọ - kekọrịta ọrụ n'etiti ndị ahịa na ndị nlebanye anya na mpụga, mepụta nyocha n'ụzọ dị mfe site na nkọwapụta akọwapụtara nke ọma na oge mmechi, wee gwa ndị otu nyocha na-akpaghị aka oge na ụdị.
Mee ka o doo anya, Nzaghachi na-arụ ọrụ - Nyochaa dọkụmentị, onyonyo, vidiyo, ibe weebụ, na ndị ọzọ, debanye aha ma kwuo okwu ozugbo na akụ sitere na oghere ọrụ nyocha, ma rụkọta ọrụ ma kọwaa nzaghachi iji zere ọrụ na-enweghị isi.
Gụgharia usoro nyocha - Nọgidenụ na-ejikwa njikwa njikwa iji hụ na onye ọ bụla na-enyocha akụ kachasị elu, mgbanwe dị mma mere na pikselụ na ntụnyere n'akụkụ, ma dozie, ọkọlọtọ, na nzacha nzacha ka ndị okike wee mara nke ọma nyocha. ime.
Sochie na Nyocha Usoro Ọrụ - Nyochaa nyocha na ihe akaebe akara aka nke oge arịrịọ na nkwenye, na-eme nchịkọta nchịkọta iji weghachite nzaghachi niile n'ime akwụkwọ a na-ekenye ya, ma gụnye obere mkpịsị aka iji nye nkwenye anya nke mgbanwe achọrọ.
Nyocha na ntanetị na nyocha ihe okike maka ndị otu ụlọ
34% nke ụlọ ọrụ ụlọ na-ekwu na ndị otu ihe okike ha na-etinye 7 ma ọ bụ karịa awa kwa izu na ọrụ ndị dị ka ịkwado nzaghachi na ịnweta nnabata.
Nkwupụta Nlekọta Okike nke Ime ụlọ nke 2018. InMotionNow & InSource.
Site na njirimara nzaghachi mmekorita nke Deltek ConceptShare, ị nwere ike hụ na ndị otu gị doro anya, nzaghachi na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ na mfe iji belata nsogbu na ịnye ọdịnaya na oge.
Nkọwa okwu na azịza na-enyere ndị otu aka ịmekọrịta ọrụ na-aga n'ihu
Ọkọlọtọ na nzaghachi nchịkọta chịkọtara nzaghachi dị irè site na nkọwa izugbe ka Ndị okike wee mara kpọmkwem ihe nyocha ga-eme
Ma ọkwa na ihe ncheta na-eme ka ndị otu nyocha mara ihe ọ bụla chọrọ nyocha na nnabata ha, oge, na mgbe ụdị ọhụrụ dị.
Tinye ihe nnwale nnwale na ntanetị gafee nzukọ gị niile yana atụmatụ nchebe nke ụlọ ọrụ
Nyocha na ntanetị na nyocha ihe okike maka ụlọ ọrụ
Mgbe ụlọ ọrụ gị na-ewepụta ọdịnaya maka ọtụtụ mkpọsa n'ọtụtụ akaụntụ ndị ahịa, usoro na-enweghị ngwụcha nke nyocha ihe okike na nyocha nwere ike ibute mbibi na akara gị. Wuru kpọmkwem maka ndị ọrụ na-emepụta ihe okike dị ka nke gị, Deltek ConceptShare na-eweta usoro nyocha na ntanetị iji nyere gị aka mee ngwangwa nyocha ahụ-belata mmefu mmepụta ma nye gị oge iji tinyeghachi mkpa onye ahịa gị.
Nwee echiche zuru ụwa ọnụ banyere ọrụ niile na-aga n'ihu
Zọpụta oge ị na-agbaso nzaghachi site na ịhazi usoro ihe ncheta iji mee ka ndị na-enyocha ọrụ na ọrụ
Etinye ma hazie faịlị na idegharị akụkọ ihe mere eme maka nyocha dị mfe
Kpọọ ndị ahịa na ndị nlebanye anya na mpụga ka ha nye nzaghachi na akụ - enweghị nbanye chọrọ
Atụmatụ dị mfe iji rụọ ọrụ na kensinammuo na-etinye ngwa ngwa n'ime njikwa ihe ntinye ọdịnaya nke ụlọ ọrụ gị n'ime nkeji
Deltek na-enye ndị ọrụ ohere iji kesaa ConceptShare n'efu site na Ọktọba 2020:
Tags: echichedeltekdeltek echiche echichennabata okike n'ịntanetịnyocha ihe okike
Uru 10 nke iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na ụgwọ ọrụ